एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी किन पुगे श्रीलङ्का? किन व्यस्त छन् पाहुना भेटघाटमा? पुरा समाचार हेर्नुहाेस – PathivaraOnline
Home > समाचार > एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी किन पुगे श्रीलङ्का? किन व्यस्त छन् पाहुना भेटघाटमा? पुरा समाचार हेर्नुहाेस
काठमाडौं, १६ असोज । एक महिना थाइल्यान्डको बैंकक र त्यसपछि भारतको मुम्बईको भ्रमणका लागि निस्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह श्रीलंका पुगेका छन् । ज्ञानेन्द्रको सचिवालयले उनीहरूको भ्रमण बैंकक र मुम्बईमा हुने जनाएको थियो । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै हिमानीले श्रीलंकामा सोमबार ४३ औं जन्मोत्सव मनाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । श्रीलंकाको कोलम्बोमा भारतका शाही परिवार श्रीलङ्का पुगेका हुन् ।
श्रीलंकाको कोलम्बोमा भारतका शाही परिवारका केही सदस्य, व्यापारीसँगै हिमानीले जन्मोत्सव मनाएकी हुन् । स्रोतले भन्यो,‘उनीहरू यसपछि भारत भ्रमणको तयारीमा छन् ।’ बुधबार अथवा विहीबार भारतका लागि कोलम्बोबाट नै ससुराबुहारी प्रस्थान हुने बताइएको छ । मुम्बईलगायतका ठाउँमा एक साता बसेपछि उनीहरू स्वदेश फर्किने तयारीमा छन् । उच्च स्रोतले भन्यो,‘अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनासँगको भेटमा नै उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ ।’
दुवैले श्रीलंकामा रहेका बुद्धका ठूला प्रतिमाहरूको पनि अवलोकन गरेका थिए ।
पछिल्ला समय सामाजिक काम, धार्मिक अनुष्ठान र राजनीतिक कुटनीतिक विषयमा निर्मलनिवासबाट ससुराबुहारी सक्रिय रहँदै आएका छन् । यसअघिको बैंकक भ्रमणका क्रममा दुवैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिक मानिएका जमर्नी निवासी व्यापारी सिद्धार्थ अम्बानीसँग भेट गरेका थिए ।
अम्बानी पूर्वराजालाई भेट्नका लागि जर्मनीबाट निजी बिमानमा बैंकक पुगेका थिए । उनीहरूबीच नेपालमा हिन्दु जागरण र राजतन्त्रको पुनर्दोय कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा विमर्श भएको बताइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार सैनिक दिवस तथा दशैंको सप्तमी तिथिका दिन उनीहरू काठमाडौं आइपुग्नेछन् । भारत बसाईका क्रममा त्यहाँका शाही खानदान, राजनीतिक व्यक्तित्व र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र हिमानीले गोप्य वार्ता गर्नेछन् ।
४३ पुगिन् हिमानी
१ अक्टुबर १९७६ मा भारतीय सियासती खानदानमा जन्मिएकी हिमानी नेपालमा नै हुर्किएकी हुन् । सोही सियासत बझाङ जिल्लामा सरेको थियो । २५ जनवरी २००० मा तत्कालिन शाहज्यादा तथा पूर्वयुवराज पारस शाहसँग उनको बिहे भएको थियो । त्यहाँदेखि उनी दरबारसँग पारिवारिक रूपमा जोडिइन् ।
१९ जेठ, २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली शाही सियासतमा शाहज्यादीबाट उनले युवराज्ञीको ताज पहिरिएकी थिइन् । धेरैले उनलाई ‘हुन नसकेकी वडामहारानी’ पनि भन्छन् ।
केही समयअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार त्रिसरा रेस्टुरेन्टमा ‘डिनर’का लागि पुगेको थियो । त्यसैबेलादेखि पारस–हिमानी सम्बन्ध साँघुरिन थालेको बताइन्छ । त्यहाँ पनि यो जोडी देखिए पनि सँगै बसेका थिएनन् ।
‘अहिले पारिवारिक सदस्यहरू एकत्रित हुने क्रम जारी रहेको छ । छोराछोरीको प्रेमका कारणले पनि यो जोडी नजिकिनुको विकल्प छैन’, निर्मलनिवास स्रोतले भन्यो,‘परिवारको एउटा सदस्य नहुँदामात्रै पनि खल्लो हुने भएपछि शाही परिवार एकत्रित हुन थालेको छ ।’
परिवार समेट्नका लागि पूर्ववडामहारनी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको भूमिका प्रमुख रहेको छ । नेपाल फर्किएर पनि छोरा पारस बाहिरमात्र बस्ने र पारिवारिक सम्बन्ध खल्लो देखेपछि उनकै आग्रहमा ज्ञानेन्द्रले पारसका लागि निर्मलनिवासको द्वार खोलेका थिए ।
दरबार स्रोतले भन्यो,‘अहिले शाही परिवारमा देखिएको यो सम्बन्ध सुधारले पारस र हिमानी नजिकिएको प्रस्ट छ । त्यसका लागि उनीहरूका छोरी र छोरा हृदयेन्द्रको पनि चाहना देखिन्छ ।’
कतिपयले माता सविताले दिएको सुझावका आधारमा हिमानी र पारसको सम्बन्ध सुधार हुनका लागि समय लागेको बताउने गरेका छन् । पतिसँग अझै केही बर्ष बस्न नहुने बसेमा अनिष्ठ हुनसक्ने सुझाव हिमानीलाई माताले भनेकी थिइन् ।
त्यसो त पारस आफ्नी प्रेमिका कन्निका सँग थाइल्यान्ड बस्न थालेपछि शाही परिवारको उत्तराधिकारीका रूपमा हिमानी नै सक्रिय थिइन् ।
थाइल्यान्ड प्रहरीले पक्राउ गरी जेल हालेपछि पतिलाई छुटाउनका लागि हिमानी नै बैंकक पुगेकी थिइन् । त्यसपछि पारस–हिमानी सम्बन्धमा सुधार आउने थालेको हल्ला चलेको थियो । थाई प्रेमिका कन्निकाको साथ पाउँदा पारसले हिमानीलाई चटक्कै विर्सिएका थिए । कतिसम्म भने कन्निकालाई भेट्नका लागि पारस लाओस् पुगेका थिए ।
अहिले दुवैबीचको दूरी घटे पनि सँगै भने बस्दैनन् । हिमानी सन्तानसहित निर्मलनिवासमा बस्छिन् भने पारस बिजुलीबजारको अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन् ।
चितवनको माडीको मेयरमा एमालेकि महतो निर्वाचित